Pringles Inotangisa Chinanazi Habanero Flavors - Potatoes News
Pringles Inotangisa Chinanazi Habanero Flavors
Kellogg Kambani, mubereki mubatanidzwa muridzi wePringles brand, yazivisa chigadzirwa-chitsva chigadzirwa zhizha rino: Pringles Wavy Chinanazi Habanero.
Maererano ne iyo kambani, iyi Pringles innovation inokurudzirwa nenzvimbo dzinopisa, senge Mexico neHawaii uye inosanganisa iyo inotapira uye tangy chinanaini chinonhuwira neinopfungaira habanero mhiripiri. Iyo Pringles nyowani inowedzera kutsemuka, nekuda kwehuremu hwayo, wavy uye kupenya uye inoitirwa kukwezva vese vatengi vari kutarisira zhizha uye vanofarira zvitsva zvinonaka zvezviitiko.
"Tinoda epic flavour mubatanidzwa paPringles, uye aya matsva-akafuridzirwa crisps haasiyane nazvo. Iyo tambo inotapira uye inonaka ichava nezvikafu zvekudya muzororo nguva yezhizha rose, zvichiita kuti grill rekumashure uye nzendo dzemumahombekombe dzenzvimbo dzinzwe senge kutiza, "akadaro Gareth Maguire, director mukuru wekushambadzira wePringles.
Zvakare, Pringles iri kupa vateveri mukana wekuhwina kunopisa kutiza kuenda kuHawaii kana Mexico. Mushure mekutenga gaba rePringles Wavy Pineapple Habanero machipisi, vateveri vanogona kupinda kuti vawane mukana wekuhwina rwendo nekutora mufananidzo werisiti ravo nekuriisa kuKellogg's Mhuri Rewards panosvika Gumiguru 14, 2021. Unogona kuwana zviri pamutemo mitemo pano.
Uku hakusi kwekutanga kutsva kwePringles gore rino, sezvakambotaurwa by Potatoes News. Mhando dzakasiyana dzakasiyana dzePringles dzakatotangwa nekambani.
Pringles Wavy Pineapple Habanero anowanikwa kwenguva yakati rebei muUS, kuWalgreens neDuane Reade zvitoro uye online, nepo zvigadzirwa zvichiripo.
ITSVA IN ALBERT HEIJN RANGE: ZVITSVO ZVOKUDYA ZVOKUDYA ZVINOBVA KUNETHERLANDS
'Yakazara mbatatisi' - isu tinofanirwa kufunga zvakare zvatinotarisira?
Tarenda Scouting PotatoEurope 2021 - 2 Nyamavhuvhu
NVWA: 'Kunyanya kutyora kana uchishandisa nzira dzekudzora-kudzora'